यसरी उत्साहित हुँदैछन् वडा सदस्यमा विजयी भएका दलित महिलाहरु « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » यसरी उत्साहित हुँदैछन् वडा सदस्यमा विजयी भएका दलित महिलाहरु
यसरी उत्साहित हुँदैछन् वडा सदस्यमा विजयी भएका दलित महिलाहरु
२०७४ जेष्ठ ११, जागरण मिडिया सेन्टर,
आफुहरुमा प्रशस्त मानवीय सीप, क्षमता भएपनि नेपाली जातीय तथा सामाजिक संरचना अनुसार सदैव दोस्रो तेस्रो दर्जाको नागरिका रुपमा गनिएका दलित महिलाहरुलाई विस्तारै राज्यका अंगहरुमा समावेश हुन थालेका छन् । पछिल्लो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्य दलित महिलाहरु विजयी भएसँगै सम्रग दलित समुदायहरु निकै उत्साहित भएका छन् । दलित महिलाहरु जति नै शिक्षित भएपनि राजनितिमा पँहुच हुन नसक्दा उनीहरु विगतका दिनहरुमा राज्यको मुलधारबाट बाहिरिरहनु पर्ने अवस्था थियो ।
आफ्नो हक अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको थियो । अन्य महिलाको तुलनामा दलित महिलाहरुलाई समाजले हेर्ने नजर बेग्लै र फरक थियो । तर स्थानीय तहको निर्वाचन सँगै प्राप्त भएको वडाहरुमा दलित महिला सदस्य विजयीले उनीहरुमा एकाएक सकारात्मक सोचको परिवर्तन भएको त पक्कै छ नै । साथसाथै उनीहरुमा समाजले हेर्ने पुरानो परिपाटीलाई पनि चुनौती दिन सक्ने वातवरण सिर्जना भएको छ । आफ्नो वडा सदस्य विजयीसँगै प्रफुल्ल भएका झक्तपुर सुर्यविनायक नगरपालिकाका वडाका दलित महिला सदस्यहरु विजयी भएपछि के भन्छन् त ? दलित अनलाइन डटकमका लागि विन्दु गहतराजले गरेको कुराकानीको बाँकी अंश
मुना परियार ( विजयी जनप्रतिनिधि वडा नं २ )
राजनीतिक उम्मेदवार नभएपनि म पहिला देखि नै विभिन्न सामाजिक सेवामा आवद्ध थिए । तर यसपालीको स्थानिय तहको निर्वाचनबाट राजनीतिक प्रतिनिधिको हैसियतबाट नै समाजलाई सेवा गर्न पाँउदा म निकै नै खुसी र हर्षित छु । परियार भन्छिन्, “समाजमा जातियरुपमा हुने विभेदका कारण दलित महिलाहरुलाई गर्न सक्ने भएपनि सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पछि पारिन्थ्यो, दलित महिलाहरु गर्न सक्ने भएपनि गर्न दिइदैन थियो तर अहिले त्यस्तो स्थितिबाट समाज केहीहद सम्म अघाडी बढेको देखिन्छ यसपालीको निर्वाचनसँगै ।” मेरो विजयी संगै मेरो वडाको विभिन्न विकासका कार्यक्रममा मेरो शशक्त भुमिका रहनेछ । सरकारले लगाउने जिम्मेवारी त छदैछ, अहिले नै केही थाहा भएको छैन् । बल्ल वडा सदस्य पदको शपथ लिएकी छु ।
पम्फा परियार (विजयी जनप्रतिनिधि वडा नं ४)
नेपाली समाजमा दलित महिलाको हकमा काम गर्न अझैपनि गाह्रो नै छ । तैपनि स्थानिय तहको निर्वाचन सँगै वडा दलित महिला सदस्य विजयी सँगै पाएको जिम्मेवारी समाल्नको लागि म निकै नै उत्साहित छु । हाम्रो वडामा अन्य समुदायले दलित समुदायलाई हेर्ने नजर अझैसम्म पनि पुरानै किसीमको छ । परियार भन्छिन्, “दलित बच्चाहरुलाई स्कुल जस्तो सार्वजनिक, शैक्षिक स्थानमा पनि दलित समुदायको बच्चाहरु त हुन भन्ने किसीमले व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ, दलितहरुले पढ्नु पर्दैन पढ्ने काम त अन्य समुदायको मात्रै हो भन्ने खालको सोच अझैपनि हावी छ हाम्रो वडामा ।” तेसैले मेरो वडा दलित महिला सदस्य विजयी सँगै मैले जतिसक्दो हाम्रो वडामा दलितहरुको शैक्षिक स्तरलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई बढि प्राथमिकताका साथ लिएकी छु । हेरौँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भावी दिनहरुमा । सरकारले दिने जिम्मावारी सँगै काममा अगाडी बढ्ने छु भनी शपथ लिएकी छु ।
गीता विसँखी ( विजयी जनप्रतिनिधि वडा नं ५)
यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा एकदमै लागि परीएको थियो । तेसैले सफल पनि भइयो जस्तो लागेको छ । आफुलाई सम्मानित हुने मौका मिलेको महसुस गरेकी छु । म अत्यन्तै खुसी छु सरकारले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न । मेरो विजय सँगै म हाम्रो वडाको समग्र विकासकार्यमा संग्लन हुनेछु । हाम्रो वडामा दलित समुदायको श्रम शोषण भएको छ । विसँखी बताउछिन्, “दलितहरु दिनभरी अरुको घरमा गएर काम गरी जिविकोर्पाजन गर्न बाध्य छन् तैपनि आफुले गरे जतिको मुल्यमा पैसा पाउदैनन् । तेसैले यहाँका दलितहरुको आर्थिक स्तर सुर्धान निकै नै जरुरी रहेको छ ” विसँखी बताउछिन् । राजनीतिक जनप्रतिनिधि भएसँगै मैले यी यावत् समस्याहरुलाई मध्यनजर गर्ने सुनौलो मौका पाएकी छु । सरकारले दिएको सपथ सँगै हरेक कार्यहरुमा आफ्नो जिम्मेवारी लाई अघाडि बढाउने योजना बनाएकी छु ।
लक्ष्मी परियार ( विजयी जनप्रतिनिधि वडा नं ७)
जनप्रतिनिधि दलित महिला सदस्य विजयीसँगै आफुलाई एकदमै भाग्यमानी ठानेकी छु । परिवारका सदस्यहरु विशेष गरी श्रीमान् ले लगाएत सिंगो समुदाय, समाजले नै मलाई प्रोत्साहन गरेका छन् राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा संग्लन हुन । तेसैले मलाई यस्तो क्षेत्रमा काम गर्न अत्यान्तै सौभाग्य मिलेको छ । परियारले भन्छिन्, “हाम्रो वडामा दलित समुदाय लगाएत अन्य समुदायमा विशेषगरी खाने पानीको अभाव र समस्या छ , म यो विकराल पानीको समस्यालाई हटाउन चाहन्छु र जतिसक्दो छिटो वडाबासीलाई खाने पानीको व्यवस्था गर्न चाहन्छु । ” यसबाहेक जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफुलाई हेर्ने पहिलाको र अहिलेको नजरमा अत्यन्तै फरक भएकाले थप नयाँ नयाँ कामहरु पनि गर्न उत्साहित नै छु । हिजो शपथ पनि लिइसकेकी छु ।
शान्ता विश्वकर्मा ( विजयी जनप्रतिनिधि वडा नं ८ )
दलित महिला वडा जनप्रतिनिधिको विजयले ममा धेरै नै खुसी थपेको छ । आफुलाई निकै नै जिम्मेवारी व्यक्ति बनाएको महसुस गरेको छु । म अहिले हामी बसाँइ सरेको भक्तपुर सुर्यविनाय नगरपालिकाको वडा नं ८ मा मात्र नभई पहिला बसेको ठाँउबाट नै राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय थिए । दलित महिला भएकै कारण राजनीतिमा स्थान पाउन पहिला पहिला निकै नै कठिन थियो । तर अहिले केही सहज भएको महसुस गरेको छु । समाजले पनि पहिला भन्दा अहिले सकारात्मक हिसावबाट हेरीरहेको छ । विश्वकर्माले थप्छिन्, “मेरो विजयी सँगै मलाई सामाजीक क्षेत्रमा काम गर्ने ठुलो मौका मिलेको छ, थप जिम्मेवार व्यक्ति बनाएको छ ।” यो जिम्मेवारी सँगै मैले आफुलाई हाम्रो वडाको विकासमा समर्पित गर्नेछु ।
अनु बयँलकोटी ( विजयी जनप्रतिनिधि वडा नं ९ )
यो स्थानिय तहको निर्वाचन सँगै प्राप्त गरेको दलित महिला वडा सदस्य विजयीले मलाई अत्यन्तै खुसी मिलेको छ राजनीतिक क्षेत्रमा संग्लन हुन । नयाँ नयाँ नै भएकाले गर्नुपर्ने कामबारेमा तेति जानकार भैसकेकी छैन । धेरै कुराहरु सिक्नुपर्ने छ सिक्दै जानेछु आगमी दिनहरुमा । दलित समुदायलाई नै तेति राम्रोसँग बुझेकी छैन् । राम्रो सँग बुझ्न पर्नेछ । बयँलकोटीले बताउछिन्, “हाम्रो वडामा दलितबस्ती र अन्य बस्तीमा अत्यन्तै अन्तर थियो । पहिला दलितहरुलाई मन्दिरमा पस्न दिदैनथे तर अहिले यो निर्वाचन सँगै धेरै नै फरक भएको छ । पहिला दलितको नाउँमा घृणाको व्यावहार गर्नेहरु अहिले भने निकै नै सम्मानजनक रुपले बोलिरहेका छन् । सँगै बसौँ, सगैँ खाँउ भन्न थालेका छन्, नबाल्नेहरुपनि अहिले बोल्ने भएका छन् ।” यो निर्वाचनले साचिन्नै परिवर्तन ल्याएको छ नेपाली समाजमा अभै ल्याओस भन्न चाहन्छु ।
कमला विश्वकर्मा ( विजयी जनप्रतिनिधि वडा नं १० )
दलित महिला वडा सदस्य पदमा विजय हुन पाउनुमा नै अत्यन्तै गर्व महसुस गरेको छु । दलित समुदायको भएको कारण पहिला समाजका अन्य व्यक्तिहरुले हेप्ने गर्थे । तर अहिले तेस्तो व्यवहार देखिएको छैन् आफुलाई सम्मानजनक स्थानमा पुगे जस्तो लागेको छ । विश्वकर्मा भन्छिन् । “हाम्रो वडामा दलित बस्ति मध्यम खालको नै छ तैपनि यहाँ तमाम खालका समस्याहरु यथावत् नै छन् । दलित समुदायको आर्थिक स्थिती सुधार्नु पर्नेछ यसका साथसाथै वडामा देखिएका अन्य समस्याहरुलाई पनि मध्येनजर गर्ने नै छु । ” महिलाहरु शिक्षित मात्र भएर नहुँदो रहेछ राजनीतिमा संग्लन भएपछि मात्र आफ्नो आवजलाई, समुदायको आवाजलाई बुलन्द पार्न सकिने रैछ । यो स्थानिय तहको चुनावले पक्कै पनि समग्र महिला लगाएत दलित महिलालाईको सशक्तीकरणमा जोड दिएको छ ।
– See more at: http://dalitonline.com/archives/23917#sthash.OlLg5eBk.dpuf
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्य on May 26, 2017 .
← सिंगै गाउँभरी रुवाबासी चलायो गुल्मिको एउटा बिवाहले	दलित महिला घर निकाला →